Ngwa Apatinib (811803-05-1) HPLC≥98% | AASraw họrọ inhibitor
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Apatinib (811803-05-1)
Rating: SKU: 811803-05-1. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Apatinib (CAS 811803-05-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Abatinib, obere omekota omekorita tyrosine kinase nke na-egbochi uto uto endothelial nke na-eme ka onye nata-2, kwadoro maka adenocarcinoma gastric metastatic na China na Oct 2014. Nke a bụ akụkọ mbụ banyere iji ya maka ọrịa cancer dị elu dịka ụdị usoro ọgwụgwọ nke atọ ruo ugbu a.
Akpado aha njirimara
Usoro Molecular: C24H23N5O
Molekụla arọ: 397.47232
agba: Yellow Yellow to edozi
Apatinib (811803-05-1) iji mee ihe na steroid steroid
Apatinib (CAS 811803-05-1), makwaara dị ka YN968D1, Mesylate.
A na-edozi ndị ọrịa cancer ọtụtụ doses nke Apatinib kwa ụbọchị maka ụbọchị 28. A kwadoro Apatinib na doses n'okpuru 750 mg / ụbọchị, 3 nke 3 dose na-amachide ọgwụ ndị na-egbu egbu na 1000 mg / ụbọchị, a kwadokwara ọgwụ kachasị elu ka be850 mg / ụbọchị.
Ịdọ aka ná ntị na Apatinib
Ị ghaghị ịma mmetụta dị iche iche mgbe ị na-ewere Apatinib. Ejiri ọbara mgbatị na ụkwụ ụkwụ na-ahụkarị akụkụ ahụ na-emekarị; Otú ọ dị, ọnyá nke apatinib bụ ihe a na-apụghị ịchịkwa ma na-ekwe omume.
Rivoceranib (Apatinib, YN968D1) bụ LSK BioPharma, bụ onye na-agwọ ọgwụ na-emepụtaghị ọgwụ na-abụghị nke China, maka ọgwụgwọ nke ọrịa ara ehi na-arịa ọrịa cancer, ma ọ bụ ọrịa cancer metastatic, cancer cancer, na carcinoma hepatocellular. A na-edezi YN968D1 na patented na Advenchen Laboratories na Southern California. A na-ere ahịa ugbu a na Apatinib na China maka ọrịa cancer gastric dị ukwuu site n'aka onye na-ede akwụkwọ ikike na Chinese, Jiangsu Hengrui MedicineCo., Ltd n'okpuru aha Aitan®. LSK BioPharma nwere ikike zuru ụwa ọnụ (ewepụghị China) ma kwadoro maka mmepe na ahịa nke rivoceranibin South Korea.
Rivoceranib bụ onye nwere ike ịmepụta ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-anabata ihe na-akpata 2 (nke a maara dịka VEGFR2) bụ nke na-akwado ụzọ ụzọ mbụ maka tumor-mediatedangiogenesis. A na-anwale ya n'ihe gbasara ọrịa 1,000 n'ụwa nile ma gosipụta nrụpụta ọrụ na ọtụtụ ọrịa cancer gụnyere cancer cancer, cancer cancer colorectal, carcinoma hepatocellular, ọrịa cancer na-abụghị obere cell, ọrịa cancer esophageal, thyroidcancer, mesothelioma, na etuto neuroendocrin. O gosipụtakwa na ọ ga - eme ka ihe dị mma na - emepụta ya na chemotherapeutics na immunotherapy, nakwa maka ọgwụgwọ.
Esi zuta Apatinib site na AASraw